ကလေးသူငယ်များ၏စိတ် – BurmeseHearts
Basic Java(JavaSE) to Advanced Java(JavaEE) Burmese Hearts Burmese Hearts news D ဝသုန် General Knowledge Internet iOS Developer Course
မိဘနှစ်ဦးရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ ဆက်ဆံရေးဟာ မိသားစုအတွင်းမှာ ပဋိပက္ခဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်း ကလေးမှာ စိုးရိမ်သိမ်ငယ်စိတ်တွေ ဝင်လာပါတယ်။ စိုးရိမ်တာက မိဘနှစ်ဦး ဘယ်တော့ကွဲမလဲ ၊ ငါဘယ်တော့ မိတကွဲ ဖတကွဲ အခြေအနေနဲ့ ကျောင်းမှာ ၊ ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝန်းမှာ အနှိမ်ခံရမလဲဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ သိမ်ငယ်စိတ်ကတော့ သူများ မိသားစုတွေ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ရှိနေတာကို တွေ့မြင်နေရတိုင်း ဒီလိုမဖြစ်နိုင်တဲ့…
ကလေးဟာ ကျောင်းနေမပျော်တာ ၊ ကျောင်းပညာရေးမှာ စိတ်မပါတော့တာတွေ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲ?
ကလေးဟာ ကျောင်းနေမပျော်တာ ၊ ကျောင်းပညာရေးမှာ စိတ်မပါတော့တာတွေဟာ ကျောင်းမှာ ကလေးစာမလိုက်နိုင်လို့ ၊ ကျောင်းမှာ…
ကျောင်းကောင်းမှာ ပညာသင်ကြားရတဲ့ တချို့ကလေးငယ်တွေ ဘာကြောင့် သိမ်ငယ်စိတ်ဝင်ရသလဲ?
ကလေးငယ်တွေဟာ မသိ ၊ နားမလည်သေးတော့ သူများစားတာ စားချင်တယ် ၊ သူများဝတ်တာ ဝတ်ချင်တယ် ၊ သူများ သုံးသလို…
ကလေးသူငယ်တွေဟာ လက်သာတဲ့ဆီ လိုက်တဲ့အတျင့် ဘာကြောင့် ဖြစ်ရသလဲ?
သူချစ်ခင်တွယ်တာသူဟာ အဖေလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်၊ အမေလည်းဖြစ်နိုင်တယ် ၊ အဖိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ် ၊ အဖွားလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်၊…
ကလေးသူငယ်တွေဟာ လူကြီးမိဘလို တန်ဖိုးကြီးတာ ၊ တန်ဖိုးနည်းတာကို ပိုင်းခြားလို့ သုံးသပ်နိုင်စွမ်းမရှိကြသေးပါဘူး။…
ကလေးတွေ သိမ်ငယ်စိတ်ဝင်နေတာကို ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ သိမ်ငယ်စိတ်ဖြစ်နေတဲ့ ကလေးငယ်တွေဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု…
ကလေးသူငယ်တွေဟာ ဘယ်အချိန်မှာ သိမ်ငယ်စိတ် ဝင်လာတတ်သလဲ?
ယေဘူယျအားဖြင့် ကလေးသူငယ်တွေဟာ မိစုံဖစုံမရှိတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ ၊ မိဘမဲ့ဖြစ်ရတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ ၊ အတန်းဖော်…
ကိုယ့်မျိုးဆက်တွေကို အဆိုးမြင်စိတ်နဲ့ ကြီးပြင်းလာသူတွေ မဖြစ်စေချင်ဘူးဆိုရင်…
ကိုယ့်မျိုးဆက်တွေကို အဆိုးမြင်စိတ်နဲ့ ကြီးပြင်းလာသူတွေ မဖြစ်စေချင်ဘူးဆိုရင် ကိုယ်တိုင်က ပြောင်းလဲရမယ်။…
နဂိုမူရင်းစိတ်ထားနဲ့ လုပ်ရပ် ဘာကြောင့်ကွဲလာသလဲ?
လိုချင်ရမက်လောဘတွေ ဖုံးသွားတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်နဂိုမူရင်းစိတ်ထားနဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ ကွဲလာတော့တယ်။…
ဘာလုပ်လုပ် အကောင်းအပြောမခံရတဲ့ကလေး ဘာသင်ယူသွားသလဲ?
ဘာလုပ်လုပ် အကောင်းအပြောမခံရတဲ့အပြင် အပြစ်ကမလွတ်နိုင်တဲ့ ကလေးရဲ့ခံစားချက်ကနေ ဘာကို သင်ယူသွားမလဲဆိုရင် ဘာလုပ်လုပ်…